दैनिक ४/५ विद्यार्थी बेहोस हुन... :: दिपकजंग शाही :: Setopati
दैनिक ४/५ विद्यार्थी बेहोस हुन थाले,पढाइ प्रभावित चिकित्सक भन्छन् - मास हिस्टेरिया, अभिभावक भने धामीको भरमा
दिपकजंग शाही सुर्खेत, जेठ ११
‘मास हिस्टेरिया’का कारण बेहोस भएका जीवनज्योति माविका विद्यार्थीहरू। तस्विरः दिपकजंग शाही/सेतोपाटी
सुर्खेतको एक विद्यालयमा अध्ययनरत विद्यार्थीहरूमा ‘मास हिस्टेरिया’ देखिन थालेपछि पढाइ प्रभावित हुने गरेको छ।
लेकवेशी नगरपालिका–४ दशरथपुरमा रहेको जीवनज्योति माध्यमिक विद्यालयका छात्रछात्रा ‘मास हिस्टेरिया’का कारण विद्यालय समयमा अचानक बेहोस हुने गरेपछि पढाइ अवरूद्ध हुने गरेको छ।
केही समय अघिदेखि सुरू भएको यो समस्याका कारण दैनिक ४/५ जना विद्यार्थी बेहोस हुने गरेको विद्यालयका प्रधानाध्यापक तीर्थ प्रसाद पौडेलले जानकारी दिए।
‘दैनिक ४/५ जना विद्यार्थी बेहोस हुन्छन्, उनीहरूको पढाइ अवरूद्ध हुन्छ,’ उनले भने, ‘बिहान स्कुल आएर एक/दुई घण्टी पढेपछि उनीहरूमा यो समस्या सुरू हुन्छ। बेलुका विदा भइसकेपछि फेरि जस्ताको तस्तै भएर घर जान्छन्।
दैनिक विद्यालयमा यस्तो समस्या देखिन थालेपछि प्रधानाध्यापक पौडेलले स्वास्थ्यकर्मीसँग परामर्श लिए। ‘स्वास्थ्यकर्मीले मास हिस्टेरिया भएको बताए’,उनले भने,‘स्वास्थ्यकर्मीका अनुसार यो समस्या एकै विद्यार्थीमा बारम्बार दोहोरिन सक्छ।’
यसले खासै असर नपार्ने बताए पनि विद्यालयमा उनीहरूको पढाइ छुट्ने समस्या भएको उनले बताए।
‘हामीले स्वास्थ्यकर्मीहरुलाई पनि यो समस्या सुनायौं,’ पौडेलले भने, ‘स्वास्थ्यकर्मीले यो एकजनामा भएको देखेपछि अर्को व्यक्तिमा पनि हुने र यो खासै अप्ठ्यारो कुरा नभएको बताउनुभयो। यहाँ समस्या हुने विद्यार्थीको पढाइ छुटेको छ ।’
कर्णाली प्रदेश अस्पताल सुर्खेतमा कार्यरत बालरोग विशेषज्ञ डा. नवराज केसीका अनुसार मानिसमाभित्र लुकेका आफ्ना समस्याहरू लामो समयसम्म खुलेर भन्न नसक्दा यो लक्षण देखिन्छ।
‘मास हिस्टेरियाको धेरै प्रकारहरू हुन्छन्। मानिसले आफ्नो भावनाहरू, समस्याहरू कुण्ठित गरेर राख्छ, त्यसमा यो समस्या देखिन्छ,’ उनले भने।
विद्यालयमा हुने गरेको यो समस्या एक विद्यार्थीमा भएको देखेमा अर्कोलाई पनि हुने डा. केसीले बताए।
एउटालाई देखिएको यो समस्या अर्को व्यक्तिले देखेमा आँखाबाट नै यो समस्या उत्पन्न हुने उनले जानकारी दिए।
धामी, झाँक्रीकै भरमा अभिभावक
बालबालिकामा यो समस्या आएपछि अस्पतालमा लिएर परामर्श गर्नुपर्ने भए पनि अभिभावक भने धामी, झाँक्रीसँग लिएर झारफुक गराउने गरेका छन्। जीवनज्योति माध्यमिक विद्यायमा अध्ययनरत एक छात्राका अभिभावक मोहनचन्द्र विसीले आफूले धामीसँग झारफुकका लागि लिने गरेको बताए।
आफ्नो छोरीलाई दुईपटक यो समस्या आएको र धामीसँग लिएपछि सन्चो भएको विसीले बताए।
‘यो स्कुलमा यस्ता विद्यार्थी धेरै छन्, झाँक्रीसँग लिएर झारफुक गरायो भने निको भइहाल्छ,’ उनले भने, ‘मैले छोरीलाई लिएर झारफुक गराएँ निको भयो, फेरि स्कुल आउँदा यस्तो हुन्छ।’
छोरीमा यो समस्या आएदेखि अस्पताल भने नलगको उनले बताए।
बालरोग विशेषज्ञ डा. केसीले भने यस्तो समस्या भएकालाई धामी, झाक्रीसँग लिएर झारफुक गर्ने कार्य गरेमा झन् समस्या बढ्ने बताए।
‘यसमा अझ घरमा लिएर झारफुक गर्ने, बोक्सी लाग्यो भनेर पिट्ने जुन कार्य गरिन्छ, यसले झन त्यो समस्या बढ्छ,’ उनले भने, ‘कुनै पनि विद्यालयमा यो समस्या देखियो भने सबभन्दा पहिले सुरूआत कोबाट भयो भनेर पहिचान गर्नुपर्छ ।’
मास हिस्टेरिया सुरूआत भएको मान्छेलाई छुट्टै ठाउँमा राख्नुपर्ने डा. केसीले बताए।
उनका अनुसार त्यस्तो व्यक्तिलाई अस्पतालमा लिएर परामर्श गराउने र तत्काल आफ्नो काममा फर्काइसक्नुपर्छ।
त्यस्तो व्यक्तिलाई आफ्नो नियमित कामबाट धेरै समय टाढा राखेमा पनि समस्या बढ्ने डा. केसीले बताए ।
केसीका अनुसार यो समस्या नेपालको सन्दर्भमा विशेषगरी किशोरीहरूमा देखिने गरेको छ।
यो अवस्थामा आफूभित्र रहेका समस्याहरू खुलेर भन्न नसक्ने भएकाले यो समस्या देखिने उनले बताए।
प्रकाशित मिति: शनिबार, जेठ ११, २०७६, १८:३६:००